Iindaba -Umgangatho ophakamileyo kunye neNdleko esebenzayo yeRIP Slip Rings
Uyilo lwe-AOOD kunye nokuveliswa komgangatho ophezulu kunye neendleko ezisebenzayo zeeringi zokutyibilika kwamashumi eminyaka. Sihlala siphucula amakhonkco ethu okumgangatho ophakamileyo we-ROV kwaye siphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezifunwayo. Izisombululo zethu zeringi ye-ROV zibandakanya amakhonkco ezityibilikisi zombane, ii-FORJs, amalunga ajikelezayo ajikelezayo / ukujikajika okanye indibaniselwano yombane, i-optical kunye nolwelo.
Amakhonkco ethu aqhelekileyo aqhelekileyo okusetyenziswa kwezithuthi ezikude yi-ADSR-R176. Le yunithi inokusetyenziselwa umbane ophezulu kunye nokusetyenziswa okuphezulu kwe-ROV, inokubonelela ukuya kuthi ga kwi-720A yamandla ombane kwi-7200VAC ephezulu kunye neesekethe ezijikelezayo, ezivalelwe ngendlu engenazintsimbi ukuze isetyenziswe kwimeko yokusebenza elwandle, ikwanokunika indibaniselwano eguqukayo amandla ombane aphezulu, imiqondiso, ividiyo, iindlela zefayibha ngokuxhomekeke kwiimfuno ezithile, ukugcwaliswa kolwelo kunye noxinzelelo lwembuyekezo yokusetyenziswa kwe-subesa nayo. Kwii-ROVs eziphantsi kwamanzi, isiliphu R176 inokutywinwa iye kwi-IP68 kwaye ukuphuma kwentambo kunokutywinwa nako ukunika umthengi iyunithi ejikelezayo yokujonga ujikelezo. Ngokusekwe kulwakhiwo lwayo oluqinileyo kunye nomgangatho ophezulu wokuvelisa, amandla kunye neesekethe zemiqondiso zinengxolo ephantsi kakhulu kunye neempawu zecrosstalk. Ubomi benkonzo yale yunithi bunokufikelela ngaphezulu kweminyaka eyi-10 ngokugcinwa simahla kwaye inokuhlaziywa ixesha elide lobomi.